#Somalia Oo Ku Guulaysatay #Dacwadda Badda Ee Ay #Kenya Ku #Muransanaayeen - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Netherland(ANN)-Maxkamadda Caalamiga ah ee ICC,, ayaa ku dhawaaqday go’aanka dacwadda Badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo socday muddo dhawr sannadood ah, kaddib markii ay dawladda Federaalka ee Soomaaliya u gudbisay dacwaddaa 2014, maxkamadda ugu sarraysa Qaramada Midoobay ee ka shaqeysa murannada xudduudaha ee u dhexeeya dowladdaha.
Haseyeeshee Maxkamadda ugu saraysa ee Qaramada Midoobay ayaa Salaasadii si weyn u taageertay Soomaaliya murankii soo jiitamay ee ka dhaxeeyay Kenya, iyadoo xadka badda ka dhigtay qeyb ka mid ah Badweynta Hindiya oo la rumeysan yahay inuu hodan ku yahay saliida iyo gaasta.
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in xukunkaas ka dhashay naf hurid iyo halgan uu sameeyay waddanka ku yaalla geeska Afrika.
Go’aanka ayaa dhigaya in la khaydo Xuduud cusub oo ay soo saartay Maxkamadda Caalamiga ah, kaas oo noqonaya mid Cadaaladda aad ugu dhow oo noqonaya xarriiq ay Soomaaliya soo jeedisay, maadaama ay biyaha murranku ka jiray ay yihiin meelaha loo aaneynayo dhowr goobood oo saliidda badda ah oo ay Kenya sheegatay, xilli ay ka faa’idaysanay burburkii dawladdii Soomaaliya iyo awood la’aanta maamulada dawladdeed ee laga yagleelay Soomaaliya.
Dacwadda ICJ, oo sidoo kale loo yaqaan Maxkamadda Adduunka, waxay khusaysay muran xuduudeed oo ka badan 100,000 sq km (ku dhawaad 40,000 sq mayl) oo dhulka badda ah oo ay labada dalba sheegteen.
Xudduuda Badda ee dib loo eegay oo ku taal aagagga dhaqaalaha gaarka ah ee loogu talagalay goobbaha dhaqaallaha qaarada ee Soomaaliya iyo Kenya, ayaa laga gaadhay oo xal loo siman yahay”, sidaa waxa yidhi, garsoore Joan Donoghue, oo ka mid ah garsooyaaasha Maxkamadda Aduunka ee ICC.